YANDEX TRANSLATOR MAKA FIREFOX - MOZILLA FIREFOX - 2019
Yandex.Translate maka Mozilla Firefox nchọgharị
Ọtụtụ ndị ọrụ nke kọmputa na-emepụta CPUs Intel Njikwa Task usoro a na-apụghị ịghọta aghọta hkcmd.exe, nke nwere ike ihie maka nje. Taa, anyị ga-agwa ya ihe ọ bụ n'ezie.
Ozi banyere hkcmd.exe
The file executable hkcmd.exe bụ mpaghara nke ihe ngosi Microsoft usoro ihe ọkpụkpụ, nke ga-eme ka ojiji nke igodo dị ọkụ iji hazie ụdị ọrụ. Ọ bụghị usoro mmemme.
Usoro hkcmd.exe na-ebupụta Intel Modkey Command Module, nke na-enye onye ọrụ ohere ịnweta ụzọ mkpirisi igodo nke ị nwere ike itinye ụfọdụ n'ime ike nke mgbawa vidiyo a n'ime CPU.
Usoro a na-amalite na usoro ahụ ma na-arụ ọrụ n'azụ, na-ewe ihe karịrị 1-5 MB nke RAM ma ghara ịmepụta ibu na nhazi.
Ị nwere ike ịchọpụta faịlụ ahụ a na-arụ ọrụ hkcmd.exe dị ka ndị a:
Kpọọ "Malite" ma banye na nyocha ọchụchọ hkcmd.exe. Pịa PKM na faịlụ ahụ wee họrọ Ebe Njikwa.
Ga-amalite "Explorer"nke nchekwa ahụ kwesịrị imeghe C: Windows System32.
Ọ bụrụ na kama ndekọ a meghere ọ bụla, enwere ọrịa nje.
Njikwa anyị na-atụle abụghị usoro nchịkwa, ya mere nkwarụ ọ gaghị emetụta Windows n'ụzọ ọ bụla, Otú ọ dị, nsogbu na ịnweta akara ngosi panel nke Microsoft nwere ike ime mgbe nke ahụ gasịrị.
Meghee Njikwa Taskchọta ya hkcmd.exe ma tinye ya na ya. N'ihe di n'ime ya jiri ihe a "Mezue usoro".
Kwenye mmechi site na ịpị bọtịnụ ahụ ọzọ. "Mezue usoro".
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ otu akụrụngwa na mmalite usoro, jiri usoro ndị a:
Gaa "Desktọpụ" na pịa nri na ohere n'efu. Ọzọ, họrọ ihe ahụ "Nhọrọ Nhọrọ", mgbe ahụ - "Ụzọ mkpirisi keyboard"nke pịa na nhọrọ "Gbanyụọ".
Mwepụ nke ọrịa
The exe faịlụ na-agba hkcmd.exe na-aghọkarị onye na-aja nje virus dị iche iche. Ihe mgbaàmà nke nsogbu ọzọ karịa ebe ọzọ karịa folda System32 bụ ihe oriri na-adịghị mma. Dịka iwu, ọtụtụ antiviruses na-enwe ike ịnagide egwu dị otú ahụ, ma ọ bụrụ na nchedo maka ihe ụfọdụ anaghị azaghachi, jiri ọrụ pụrụ iche dị ka Dr. Ngwọta weebụ.
Download Dr. Ngwọta weebụ
Summing up, anyị mara na n'okpuru ọnọdụ nke iji ọhụrụ antivirus na-adọ emelitere ọdụ data, hkcmd.exe ọrịa bụ eleghi anya.